Ini ndinotenga iyo iPhone 12 izvozvi kana kumirira iyo nyowani iPhone 13? | IPhone nhau
Mubvunzo wekusingaperi kana mazuva aya achisvika ndiwo waunogona kuverenga mumusoro wenyaya: Ini ndinotenga iyo iPhone 12 izvozvi kana kumirira iyo nyowani iPhone 13? Mune ino kesi, mhinduro inogona kunge yakasiyana zvichienderana nenyaya yacho, asi ikozvino tichaedza kukuyambira neimwe nzira kuti usamhanyire kuita sarudzo iyi.
Kana isu tichitaura nezve iPhone tinofanirwa kufunga nezve zvinoverengeka zvinhu uye ndezvekuti ivo vanorasikirwa zvishoma kukosha mumusika kunyangwe hazvo iyo nyowani modhi inobuda, asi ichokwadi kuti iwe unogona kuwana zvimwe zvinonakidza zvinopihwa uye Iwe zvechokwadi uchakwanisa kuchengetedza mari kana iwe ukamirira chete kuvhurwa kweiyo nyowani iPhone 13.
Mamwe matsva eiyo nyowani iPhone 13 akakosha senge 120Hz inoratidzira, inogara iri-pane kuratidzwa, kana kamera zvinowedzera, asi hazviratidzike kuti tichava neshanduko huru muchinhu chitsva ichi maererano nerunyerekupe nhasi ... Tichangozviona izvi pakuvhura uye parizvino pane nguva diki yazvo saka zviri nani kuti usamhanyire kupinda sarudzo kubva pakuburitswa kwemari haisi diki mune zvese zviitiko.
1 Parizvino yangu yekare iPhone inoshanda zvakanaka
2 IPhone yangu haisi kushanda zvakanaka uye ndinofanira kuichinja
3 Zano rakanakisa izvozvi nderekuti uve nemoyo murefu.
Parizvino yangu yekare iPhone inoshanda zvakanaka
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vane maoko avo iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, kana kunyange iPhone X kurudziro ndeyekuti iwe mirira kusvika kweiyo iPhone 13 kuti uitenge. Iri rinogona kunge riri rairo rakanakisa revashandisi ava vane chishandiso "chekare" uye vanoda kuenda kune iyo modhi nyowani.
Chero zvazvingaitika, kana kuvandudzwa kwakaitwa mune nyowani iPhone 13 modhi iyo inoratidzwa mumwedzi waGunyana haufarire unogona kugara uchiwana mhando dze iPhone 12 nemutengo wakaderera, saka mune ino kesi kana yako iPhone ichishanda nemazvo zviri nani kuichengeta kusvikira zuva rekuratidzira.
IPhone yangu haisi kushanda zvakanaka uye ndinofanira kuichinja
Mune ino kesi, iwe chaunogona kuita kutsvaga chinonakidza chinopihwa cheiyo iPhone iyo yakura kupfuura iwo azvino mamodheru. Kune akagadziriswazve iPhone madhiri ayo anogona kuve ekushandisa kukuru muzviitiko izvi. Icho chikonzero chiri nyore, iwe unozochengetedza yakawanda mumutengo uye iwe unogona kuisa imwecheteyo terminal pakutengesa uchirasikirwa nemari shoma mumusika. Kana iwe ukachinjira kune iyo iPhone 12 iyo investa iri yakakwira, saka mune iyi kesi hatikurudziri iwe kuti utenge iyi yekupedzisira iPhone kunze kwekunge iwe uine mari yakawandakana. Iko kudyara kwakakura uye iwe ucharasikirwa nemari yakawanda nekutenga kwako, kune rimwe divi kana ukasarudza imwe yekushandisa kusvika munaGunyana wozoisa pamusoro pekutengesa ungangorasikirwa nemari yakawanda kudaro.
Kana iyo iPhone 13 modhi yaunzwa, unogona kusarudza iyo yaunoda zvakanyanya, iyo iPhone 12 ine imwe dhisikaundi kana enda kune iyo nyowani modhi zvakananga. Neiyi nzira iwe unogara uchibuda uchikunda nekuti mari ichave iri mumhando nyowani. Iwe unogona zvakare kusarudza kusarudza iyo iPhone 12 uye enda kubva ku13, asi izvo izvozvi isu hatifunge kuti isarudzo yakanaka.
Zano rakanakisa izvozvi nderekuti uve nemoyo murefu.
Kana iwe usine chakanyanya kudiwa kana chaiko hazvisi nekuti yako iPhone yakaputsika, chinhu chakanakisa mune zvese zviitiko kubatisisa muna Nyamavhuvhu uye kumirira kuratidzwa kwaGunyana kusarudza. Isu tinoziva kuti zvakaoma kutarisira chimwe chinhu chinononoka kupfuura zvakajairwa kana iwe uine yazvino chizvarwa kamera iyo yaunoda, kunyange chiri chokwadi kuti kumirira ichiri sarudzo yakanakisa panguva ino.
Saka kumubvunzo wekuti Ini ndinotenga iyo iPhone 12 izvozvi kana kumirira iyo nyowani iPhone 13? Mhinduro ichave yekumirira kuratidzwa kweiyo iPhone 13 uye wozoongorora kuti unofarira here kana kutenga iyi modhi nyowani ichaunzwa nekambani yeCupertino. Chaizvoizvo kutenga iPhone 12 izvozvi haisi yakaipa sarudzo asi zviri pachena kuti iyo iPhone 13 ichawedzera kuvandudza pamusoro peiyo yazvino modhi uye sekutaura kwedu iwe unogona kuwana chinonakidza chinopihwa cheiyo iPhone 12 kana iyo modhi yapiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Ini ndinotenga iyo iPhone 12 izvozvi kana kumirira iyo nyowani iPhone 13?